घर नभत्काउ,पराईको शरणमा जान नपरोस्
[2015-01-23 오후 5:18:00]
वाचा पूरा गर जनताले पटक पटक खवरदारी गरि नै रहे । निर्धारित समयमा संविधान देउ भन्दै दवावका स्वर मुखरित गरिरहे । निरन्तर दवाव जारी रह्यो । दवावमा सवै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनीधित्व थियो नै । नागरिक समाज,युवा संगठन, पिछडा वर्ग जो जस्ले जसरी । दवाव दिए ।
विदेशमा रहेका नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा खवरदारी जारी राखे । दूरदराजका वस्तीहरु जसलाई संविधान भन्दा पनि भरे के खाने भन्ने चिन्ता थियो र छ । उनिहरुलाई पनि संविधानको आशा छदै थियो । प्रतिक्षा थियो । आफनो र राम्रो संविधानको । तर ति सवै आशा र विश्वासका विपरीत न देशले माघ ८ मा संविधान पायो न त खुसी नै ।
संविधानसभा करोडौ जनताको मताधिकार र भावनालाई कुण्ठीत वनाउदै माघ ९ तिर लाग्दै छ । तोकिएको अन्तिम दिन माघ ८ मा पनि संविधानसभाको वैठक शुरु भयो । बैठक सुरु हुन नपाउँदै विपक्षी मोर्चाले नारावाजी लगाउन थालिहाले ।
संविधान पाउने आशामा जनताले दोश्रो संविधानसभा मार्फत जनप्रतिनीधि पठाए । तर संविधानसभा छिरेका जनप्रतिनीधि वीच एकआपसमा धेरै मुद्दामा सहमति त भयो तर संघियताको सवालमा संविभानसभामा एकआपसमा कुरा मिल्न नसक्दा अवस्था जटिल वन्दै गएको छ ।
ठाडो र तेश्रोमा अल्झेको विवादले नै संविधान जारी गर्ने प्रकृयामा अवरोध भईनै रह्यो । यसरी आपसमा वल्झेको गाठोले वर्तमानलाई हसाउदै भविष्य सुखद वनाउन मुश्किल पर्दै छ ।
यो अवस्थाले हरनेपालीको वर्तमानलाई रुवाउने संकेत गर्दैछ ।
अनि हुर्कदो सन्ततीलाई समेत त्यहि वाटोमा लाने पकका छ । देश र जनताले संविधान पाउन नसक्ने परिस्थीतिलाई लिएर देशैभर जनआक्रोश चुलिदो छ ।
संविधानको नाममा भईरहेको यस खाले गतिवीधिले भोली देश थप अस्थीर राजनीतिको चंगुलमा फस्ने दिन पर छैन । त्यो अवस्थाको एकमात्र दोष मुलुक हाक्ने नेताहरुको थाप्लोमा नै जाने छ ।
अन्ततः यसै खाले अस्थीरताले आफनै घरको छानो उडने छ । भितो ढल्ने छ अनि जमिन भासिने छ । अनि नचाहादा नचाहदै भोली वासकै लागी छिमेकीको निगाहामा जानु पर्ने अवस्थामा छिमेकीले दिएकोे गोठमा वस्नु पर्ने नियतीको आकँलन कसले गरेको छ ।
त्यसैले आफनो घर वलियो वनाउन आर्फै लाग्नु पर्छ । पराईले त शरण दिए भःै गरि खुच्ािँङ मारेको कसले सहन सक्छ ?
घर भत्काएर पराईको गोठमा वस्नु पर्ने परस्थीतिको सीर्जना जनतालाई नगरिदेउ ? तसर्थ माघ ८ को निर्धारित समय सकिएपनि आफ्ना बाचा सम्झनुस र जनता र देशको भाग्य र भविश्यसंग जोडिएको नयाँ संविधान दिनुहोस ।